आफ्नो काम-कुरा, व्यक्तित्वलाई प्रभावकारी बनाऔँ। ५ प्रयोग गरी हेरौँ ! – नयाँ प्रहर
आफ्नो काम-कुरा, व्यक्तित्वलाई प्रभावकारी बनाऔँ। ५ प्रयोग गरी हेरौँ !
याद गर्नु भएको छ, आफ्नो वरी-परीको कोही साथी प्रभावकारी हुन्छन्, जे गर्न आट्यो गरेरै छोड्छन। यता-उता गर्यो आफ्नो काम कुरा मिलाई हाल्छन।
आज त्यस्तै सामाजिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने मनोविज्ञानका केही उपाय; अनावश्यक सामाजिक परिस्थिति र आफ्नो अप्रिय मुड (mood) लाई एकै पलमा परिवर्तन गर्ने केही नयाँ उपाय सिकौँ। यी अभ्यास दैनिक जीवनमा निकै उपयोगी छन्।
१) आँखाको चित्र देखाएर नियम-कानुनको पालना गराउने
यदि केहीनियम भन्दा-भन्दा वाक्क लागिसक्योभने त्यसको तस्वीरमा ठुलो-ठुलो आँखाको चित्र राख्नुस्। स्कुलमा फोहोर फाल्ने कुदान / डस्टबिनमा आँखाको चित्र राखिदिए, फोहोर केटाकेटीले कुदान / डस्टबिनमै फ्याल्छन। यो चित्र बैंकमा लोनदिँदा, पुस्तकालयमा पुस्तक तोकेको समयको फिर्ता गराउनुछ भने पनि यो उपाय प्रभावकारी हुन्छ।
आँखाको चित्र देखाएर नियम-कानुनको पालना गराउने
२) अगाडिको मान्छेलाई “आइनारुपी” चित्रण देखाउनु (mirroring technique)
कहिलेकाही हामी निकै अपेक्षा, आशाको साथ कुनै मिटिंग/बैठक, भेटको लागि जान्छौं तर परिस्थितिले साथ दिदैन। हाम्रो आशा अधुरो रहन्छ। ठुलो मौका गुमाउन पुग्छौँ। कसरी रोक्ने?
महत्वपूर्ण मिटिंग/ भेटमा अगाडिको व्यक्तिको खुट्टाको अवस्था, हातको हाउभाउ, स्वरको गति, आवाजको शैली , शब्दको छनोट जस्तो छ त्यस्तै उतार्नु। तपाईंको कुरा, व्यक्तित्वले अगाडिको मान्छेलाई राम्रो प्रभाव पार्छ। तपाईंको सफलताको सुनिश्चितता अब तपाईंको हातमा छ।
३) अल्छी लाग्दा कलम टोक्नुस्
कतिपय समयमा काम गर्न जाँगर लागि रहेको छैन, पढ्दा-पढ्दै बीचमै छोडिदिउँ जस्तो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो हातमा भएको कलम टोक्नुस्। यो शारीरिक क्रियाले तपाईंको दिमागको सुस्ती एकै पलमा हटाउँछ।
नजानी-नजानी मेरो यो बानी सानै देखि रहेछ। आनन्द आउने रहेछ, काम सिद्धिने रहेछ। मसँग एउटा कलम पनि छैन, जुन पछाडि नटोकिएको होस्। कलम नटोक्नेहरुले चकलेट, चना, मकै, बदम चपाउने बानी गरे झन् राम्रो।
४) आफ्नो सहकर्मी, गुरु, हाकिम,जीवनसाथी आदिलाई उनीहरुको नामले बोलाउनुहोस्
यदि कुनै सम्बन्धमा दुबै व्यक्तिको अस्तित्व, महत्त्व, समान स्वामित्व राख्नुछ; सधैँ त्यो सम्बन्धलाई विश्वास र निष्ठाको आधारमा कायम गराउनु छ भने आफ्नो सहकर्मी, गुरु, हाकिम, जीवनसाथीलाई उनीहरुको नामले बोलाउनुले प्रभाव पार्छ। हाम्रो संस्कारमा आफू भन्दा ठुलाको नाम लिने चलन नभएकै भएर सधैँ ठुला र सानामा संकोच अनि विश्वासको नाता कम पाइएको होला। संस्कार भनेको बनाउने हो, संस्कार हरेक पल सपार्दैं अघि बढ्न सकिन्छ।
५) जब घण्टौको उदासीनताबाट छुट्कारा चाहिन्छ
कहिलेकाही एउटै कुरा, घटनाले घण्टौ-दिनौं सताउँछ, त्यो यादबाट मुक्ति चाहन्छौं तर आफै मुक्ति पाउनै सकिरहेको हुदैनौँ। हामी एउटा अभ्यास गर्न सक्छौं। २०७२ सालको भुकम्प सम्झनुस्। त्यो पहिलो कम्पन सम्झनुस्।
अहिले पढौँ, पछि गरौंला सोचिरहनु भएका साथीहरु, यो अभ्यास सिक्नु छ भने पछि होइन, अहिले सम्झिहाल्नुस् त। दृश्य र अनुभूतीले डर लाग्न थाल्छ। केही सेकेन्ड समय दिनुस् …1…2…3…4…5… अब बसेको ठाउँबाट उठ्नुस्। टाउकोलाई ६० डिग्रीमा उठाउनुस्, हात माथि माथि आकाश तर्फ लैजानुस् । के भयो? अनुभूति गर्नुस्। जति समय अनुभूति गर्न मन लाग्छ, गर्नुस् 🙂
सिधा वा माथि हेर्दा उदासीनता घट्छ। त्यसैले सधैं आफ्नु शीर उच्च राख्नु पर्छ।
पाँच भन्दा बढी प्रयोग एउटै लेखमा समावेश गरे त्यो प्रभावकारी नहोला। आजलाई यति नै गरौँ।
← मनोविदलता (SCHIZOPHRENIA) को बारेमा जानौं
मुलुक विदेशीको सहयोगको भरमा बन्दैन – भिम उपाध्याय →